RASMI: Kooxda Bayern Munich oo xaqiijisay lambarka uu u xiran doono saxiixeeda cusub ee Leroy Sané – Gool FM
(Munich) 03 Luulyo 2020. Kooxda kubadda cagta Bayern Munich ee dalka Jarmalka ayaa shaaca ka qaaday lambarka uu u xiran doono saxiixeeda cusub ee Leroy Sané.
Naadiga reer Jarmal ee Bayern Munich waxa ay xaqiijisay in wiilkeeda cusub ee Leroy Sané uu u qaadan doono lambarka 10-aad xilli ciyaareedka soo socda.
Hadda Coutinho ayaa xiran lambarka 10-aad ee kooxda Bayern Munich, kaasoo cusbooneysiiyay qandaraaskiisa inuu kusii nagaado Bavarian-ka ilaa dhammaadka xilli ciyaareedka.
Dhammaan taageerayaasha Bayern waxay fursad u leeyihiin inay iibsadaan maaliyadda Sane ee xilli ciyaareedka soo socda uu xiran doono iyadoo dukaammada Online-ka kooxda la soo dhigay isla markaana taageerayaasha Bayern ay si toos ah u iibsan karaan maaliyadda laacibkan khadka dhexe uu qaadan doono.
Bayern ayaa daaha ka qaaday in Coutinho uu fahamsan yahay go’aanka Bayern, isla markaana uu siiyay maaliyadda lambarka 10-aad ciyaaryahan Sane, kaddib wadahadallo uu la yeeshay Rummenigge iyo Salihamidzic.